सेरोफेरो : को ड्राइभर, को खलासी ?
को ड्राइभर, को खलासी ?
नेपालमा जहाज पुगेन बाहिरबाट किन्ने भन्दैछन बरु पोखरा काठमाडौं कुद्ने माइक्रोलाई पखेँटा हाल्दिए त भैहाल्यो नी । ती कुनै हवाइजहाज भन्दा कम छन् त ?
बाफ रे यस्तो बत्ताउँछन् कि आफू त सुकेका पातझै उडेजस्तो लाग्छ । सुकेका पात जस्ता हामी यात्रुका ज्यान अब उडेर आँगोको भुंग्रोमा परेर खरानी हुन बेर छैन । जिन्दगीनै खरानी बनाउने गरेर गाडी कुदाउने फुच्चे केटाहरूको चुरिफुरी हेरिसक्नु हुन्न ।
अब किन यसरी जमिनमै नटेक्ने गरि कुदाको भनुम भने मुख भरिका जवाफ फर्काउलान भन्ने डर ।
हुन पनि बीचराहरूले कसरी चलाउन त बाटोमा बाटो पनि चलाउन लायकको भए हो हुन्छ । चारवटा भैसी पुर्न मिल्ने, १२ बोरा बर्डफ्लुले मरेका कुखुरा पुर्न मिल्ने खाल्डाखुल्डी पाइलै पिच्छे भेटिन्छन् । त्यो माथि आइसक्रिम जस्तै सम्झेर बालुवा पनि ट्रकमा चुलि बनाएर पानी चुहाउँदै ल्याउँछन्, काठमाडौंमा जो घर ठड्याउनु छ । बाटो च्यात्तिएर आपद ।
त्यस्तो बाटोमा ‘अत्तिन पत्ति पिंङमा बत्ति’ भनेझै गरि माइक्रो कुदाउँदा त आंङै सिरीङ हुने ।
एक पटक अचम्म भो । काठमाडौंबाट माइक्रो चढेको । आडैमा मोडामा पनि मान्छे राख्याथ्यो । ड्राइभरले खुब कुदाए गाडी । लडाउला, खसाल्ला, ठोक्ला भन्दा भन्दै अलिकति बित्तोले भित्तो जोगिन्छ ।
अब त अत्ति भो, सबका आँखा एक अर्कालाई को कति डराएछ भनेर हेर्न थाले । म पनि मुटु कमाए पनि आँखा भने नकमाइ बस्छु भनेको काँसक्नु, झ्यापकी झ्याप ब्रेक हानेको छ, कुदाको छ । हैरानै खेलायो । आजै रैछ अन्तिम दिन भन्दै सम्झनु पर्ने सबैलाई सम्झन थालेँ ।
‘ए बाबु माछौं क्या ?’ आमैले मुख खोलिन ।
हुन त आमैको उमेर भन्दा हाम्रो उमेर अझ धेरै बाँकी थियो होला, बाँच्दै गए मर्न लाइ । तर पनि उनलाई चाहि मान्नु पर्छ । उनले मुख खोलेर ठिक भो । हामी जस्ता आला काँचाले मुख खोलेको भए ती ड्राइभरले के भनेर मुख फर्काउँथे थाहा भएन । राम्रो चाइ हुन्थेन ।
आमै बोले पनि ड्राइभरले त वास्तै गर्दैनन् । झण्डै बाइकलाई हानेर मारेका । बीचरो बाटो छाडेर भित्तो भित्तो ढुलमुल गर्दे फेरी बाटोमा आएर पछाडी लाग्यो ।
अब त अरु पनि कराउन थाले, ‘बिस्तारै चलाउन ।’
‘चलाइत राख्याछु त, त्यस्सै हाम्लाई सिकाउने ?’ बल्ल उसको स्वर सुनियो, त्यो पनि खस्रो । ‘लौ हरि जोगाउ तिम्रै सन्तान हुँम’ आमैले गुनगुन गरिन । मैले पनि ‘मःम’ भनेँ मनमनै । क्यार्नु त, भनेको मान्दैन । झर्न सकिन्न । बरु लेख्या रछ भने आजै चैट भन्यो मनबाँधेर बस्यो । हरेक पटक मान्छेहरू कराउँदा, जगल्टे खलासी बीच बीचमा प्वाक्क प्वाक्क बोल्छ बा, ‘ नकराउनुस् न कसरी चलाउने तपाइलाई था हुन्च कि हाम्लाई ?’
‘त्यसका जगल्टा केलाउन पाका भए खुब मज्जा आउने थियो’ मनमनै सोच्यो बस्यो । के निहुँ खोज्नु खै । फेरी मुख खोल्न हुन्न, कति ले त आन्द्रा भुडिभित्रकै बाहिर आउने गरेर फोहोरी फोहोरी कुरा बोल्दिन्छन् । भैगो । सरकार उस्तै, जनता उस्तै । हामी उस्तै तिमी उस्तै । त्यो बेलामा पनि चुप लाइयो ।
खाजा खाने बेला आइपुग्यो कुरिनघाट हो कि के जाती ठाउँमा रोक्याथ्यो । खासै बाटोमा खाजा खाने बानी त्यती थिएन । झन त्यसबेला सरकारले कतै झिंगा समात्याथ्यो, कतै डेट एक्सपाएर भएको तेल । राजमार्गमा अल्लि छाडै भएका छन होटलवालाहरू भन्ने हल्ला थियो, स्वाथ्यका मामलामा । फलफुल किनेर खाइयो । खाजापान गर्ने होटल पनि गजपकै थियो । ज्वाइ आए झै गाडीको ढोकैमा लिन आउँथे । भित्र गएर खाना अर्डर गरेर जुठो नहालुन्जेल सम्म सबै ग्राहक ज्वाँइ नै हुन्थे । जुठोहालेपछि सबै मान्छे च्वाँइ हुन्थे, महंगीले । सफा त त्यस्तै हो । भनेको कसले पो मान्छ र यो देशाँ । धेरै बेर रोक्यो, साहुनीसँग गफैमा व्यस्त । उनकै टाइममा हिड्नु पर्ने भो । यति बेला सम्म म केही बोलिन ।
जब खाजा खाइसकेपछि गाडी चल्न थाल्यो, खलासीमा बसेको केटोलेपो गाडी चलाउन थाल्या रछ बा । ए हरि । यस्तो बेजोड पारामा स्टार्ट गरेर हुँइकायो नी, अब गइयो भन्ने भो । डरले सबै थरथर । अचाक्ली भो । सबै एकाएक कोकोहोलो गर्न थाले । मेरो त पारो छुट्यो । अब त नबोली भएन, ‘खलासीलाई गाडी चलाउन दिने ? मार्न खोज्या हो ?’
यस्तो सुन्ने बित्तिकै ड्राइभरको सिटमा भर्खरै बस्न पुगेको केटो रिसाउँदै भन्यो, ‘के भन्ठानेको, ड्राइभर त मै हो । के निधारा लेखेको छ म ड्राइभर हैन भनेर ?’
उसको कुरोले सबै झनै अचम्ममा परे । म चार छक (तिन प्लस एक थप), पाँच बल्ड्याङ । बल्ल बल्ल बोलेको झनै अलमल पो भो । अघि ड्राइभर बन्ने केटो अब ढोकातिर आएर बसेको थियो । ‘उहाँ नै हो यो गाडीको ड्राइभर, के कुरा गर्नु भाको ?’ उसले अल्लि चर्को स्वरले बोल्यो ।
‘ल अघि आफूले किन चलाको त गाडी ?’ आडैका दाईले मुख खोले ।
‘के चलाउनै हुन्न, म अर्को गाडीको ड्राइभर हो,’ उसले नयाँ कुरो निकाल्यो ।
ल अब जता जता पण्डित बाजे उतै उतै स्वाह । सबै जना गुनगुन गर्न थाले ।
‘मान्छे चिनेरे बोल्नु पर्छ नी’ भर्खर गाडी चलाउने मानहानीको मुद्धा हालुँला झै अझै रिसाइराखेको थियो ।
उसले आफ्नो मान हानी भएको ठान्यो कि क्या हो, त्यहाँबाट पोखारा आउँदा सम्म यति हाक्यो की, कुरै नगरौं । उस्तै मुटु भएका मान्छे भएका भए पोखरा रामघाटमा सोझै लगे हुने ।
झण्डै बाँचियो र यी कुरा लेख्न पाइयो ।
Labels: अनुभव, यात्रा, व्यङ्ग्य